Zikhethiwe izintokazi ze-Face of Msunduzi | News24
Zikhethiwe izintokazi ze-Face of Msunduzi
ISITHOMBE : sithunyelweIzintokazi ezidle umhlanganiso esigabeni sabantu abadala kuzime i-Face of Msunduzi obuse-Old prison ngempelasonto.
ZIKHETHIWE izintokazi ezizoba onobuhle baMasipala uMsunduzi ngoMgqibelo mhla ka- 4 kuNcwaba (August) e-Old Prison emcimbini we-Face of Msunduzi.
Lo mcimbi uhlelwe Intsha yoMzansi Modellinga Agency kanti kungokwesibili wenzeka kulo nyaka.
Lo zime ubuqukethe imikhakha emithathu owabantu abadala, ama-teenagers nezingane ezincane. Kuyona yonke le mikhakha kukhethwe ozime abathathu abahambe phambili.
Ngokusho komsunguli walozime uMnuz Thandokuhle Ace Dlamini uthe lena ngenye yezindlela abazama ngayo ukufundisa intsha indlela yokuziphatha baphinde balekelele labo abafuna ukuthatha ukumodela bakuse ezingeni eliphezulu.
“Sifisa ukubona lo zime ukhula minyaka yonke ukuze sizokwazi ukuthuthukisa intsha esakhula ukuze ibe nento eyenzayo ingagcini yenza izinto ezingalungile njengokungena ophuzweni oludakayo badle nezidakamizwa,” kubeka yena.